Hatramin’ny talata teo no nitokona ny RF2 na ny rantsana mpandraoka fako amin’ireo fokontany maromaro eto
Antananarivo, ho an’ny tetsy amin’ny fokontanin’Ambohitrakely manokana. Raha ny nambaran’izy ireo dia ny tsy fandraisany ny tambin-karamany avy amin’ny fokontany no anton’ny fitokonana.
Ho an’ny teny Ambohipo kosa dia niara-nientana nanadio sy nandroaka ny fako teny an-toerana ireo mponina. Nanasatra kosa anefa na izany aza ny niandry ny kamiao mpandroaka ireo fako ary raha ny voambara moa dia mbola mipetraka ny olana eo amin’ny CUA sy ny SAMVA.
Ny kandida mirahalahy, Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana, no hiatrika ny fiodinana faharoa amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena malagasy ny 19 desambra izao, raha ny vaovao ofisialy navoakan’ny HCC. Izy mirahalahy irery ihany koa no nahatafaverina ilay onitra mitentina 50 tapitrisa ariary.